मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैनः डा. राजन भट्टराई « Bagmati Page
मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैनः डा. राजन भट्टराई
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय सदस्य डा. राजन भट्टराईले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि ताजा निर्वाचनमा जानुको विकल्प नरहेको बताएका छन् ।
प्रवासी नेपाली एकता मञ्च पोर्चुगलको भर्चुअल विशेष भेलाको उद्घाटन कार्यक्रममा उनले राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको अभियानलाई पूरा गर्न ताजा जनादेशमा जान खोजिएको स्पष्ट पारे । प्रतिनिधिसभा विघटन रहर नभई बाध्यता भएको उल्लेख गर्दै निर्वाचनलाई सफल पार्न प्रवासी नेपाली सबैको साथ र सहयोग अपरिहार्य हुनेमा उनको जोड थियो ।